အိုဘားမား မြန်မာပြည် နိုဝင်ဘာ ၁၉ လာမည် | ဧရာဝတီ
လင်းသန့်| November 9, 2012 | Hits:4,918
3 | | အိုဘားမားသည် မြန်မာပြည်သို့ ပထမဆုံး လာရောက်မည့် အမေရိကန် သမ္မတ ဖြစ်မည် (ဓာတ်ပုံ- Reuters)
ဒုတိယ သက်တမ်း ပြန်လည် အရွေးခံရသော အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမားသည် “ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဖနွမ်ပင်” တို့သို့ နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့မှ ၂၀ ရက်နေ့အတွင်း လာရောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတ အိမ်ဖြူတော်က တရားဝင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်အတွင်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်တို့နှင့် တွေ့ဆုံပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ “ဖော်ဆောင်နေဆဲ ဒီမိုကရေစီ အကူးအပြောင်း” အတွက် အားပေးမည်ဟု အိမ်ဖြူတော် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဂျေး ကာနီက ပြောကြားသည်။
အိုဘားမားသည် မြန်မာပြည်သို့ ပထမဆုံး လာရောက်မည့် အမေရိကန် သမ္မတ ဖြစ်မည်။ ၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန် ဒု-သမ္မတ ရစ်ချတ်နစ်ဆင် မြန်မာပြည်သို့ လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ဖူးသည်။
အမေရိကန်အစိုးရနှင့် ရန်ကုန်ရှိ အမေရိကန်သံရုံးက မည်သည့်နေ့ရက် လာရောက်မည်ကို အတည်မပြုသေးသော်လည်း အမည်မဖော်လိုသူ မြန်မာအစိုးရအရာရှိတဦးကို ကိုးကား၍ နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင် လာရောက်မည်ဟု ရိုက်တာ သတင်းဌာနက ရေးသားဖော်ပြထားသည်။
အမေရိကန် သမ္မတ ခရီးစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွင် သိသာသည့် တိုးတက်မှုများ မြန်မာအစိုးရက ပြသသင့်ကြောင်း မြန်မာ့နိုင်ငံရေး လောကတွင် ပြောဆိုကြသည်။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်သည့် ဦးကိုကိုကြီးက “သူလာတာရဲ့ အကျိုးဆက်အဖြစ်နဲ့ ကျန်ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ အကုန်လုံး ပြန်လွှတ်ပေးဖို့လိုမယ်”ဟု ဆိုသည်။ ထို့အပြင် “ပြည်တွင်းစစ် ကိစ္စတွေ၊ ပြည်တွင်း ပဋိပက္ခတွေ အဲဒါတွေကို နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးဖြေရှင်းဖို့ ခိုင်မာတဲ့ ကတိက၀တ် ရထားတာမျိုး လိုအပ်တယ်”ဟု ဦးကိုကိုကြီးက ဆိုသည်။
အရေးပါသည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်သည့် လွှတ်တော်တွင်း ဥပဒေပြု လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ သွက်လက် မြန်ဆန်ရေး နှင့် တရား ဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို အကောင်အထည်ဖော်ရေး သိသာသည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများ မြင်တွေ့ရန် လိုအပ် သည် ဟုလည်း သူက ဆက်ပြောသည်။
ကချင်ပြည်သူ့တိုးတက်ရေးပါတီ ခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာ တူးဂျာကလည်း အမေရိကန် သမ္မတ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ သို့လာခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အမေရိကန် အကျိုးစီးပွားတခုတည်းကို မကြည့်ပဲ ပြည်တွင်းစစ်ရပ်ကာ ငြိမ်းချမ်းရေး အာ မခံချက်ရခြင်း၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွတ်မြောက်ခြင်း စသည့် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် သိ သာသည့် တိုးတက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
“ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲရေး၊ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးရေး ဖော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာ လည်း ပိုပြီးတော့မှ အကျိုးရှိနိုင်မလားလို့ အဲဒီလိုထင်တယ်။ မလာထက် လာတာက ပိုကောင်းမယ်လို့ ထင်တယ်” ဟု သူက ဆိုသည်။
ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး KWO အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး နန်းဒါးအယ်ကလယ်ကမူ ” မြန်မာပြည်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလုပ်နေတယ်ဆိုသည့်တိုင်အောင် ကျမတို့ တိုင်းရင်းသား နယ်မြေတွေမှာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးက လုံးဝ အာမခံချက် မရှိနေသေးတော့ အပြောင်းအလဲကို တကယ်ပဲ လိုလိုလားလားနဲ့ လုပ်နေပါတယ်လို့ ပြောရတာ ခက်တယ်” ဟု ပြောပြီး ” ဖြစ်လွယ်ပျက်လွယ်တဲ့ မယုတ်မလွန် အခြေအနေမှာပဲ ရှိနေသေးတယ်၊ ဒီအတိုင်းပဲ ကရင်ဒုက္ခသည်တွေဆိုရင်လည်း အနာဂတ် မရေမရာ အခြေအနေမှာပဲ ရှိနေသေးတယ်၊ ဘာအာမခံချက်မှ မရှိသေးဘူး” ဟု ထောက်ပြပြီး အမေရိကန် သမ္မတ၏ မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်မှာ စောလွန်းသေးကြောင်း ဆိုသည်။
တဖက်တွင်လည်း အိုဘားမား၏ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီး စဉ်သည် တရုတ် နိုင်ငံအား ချိန်ခွင်လျှာ ညှိရန် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သုံးသပ်ဝေဖန်မှုများ ရှိသည်။
တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာ သံအမတ်ကြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသူ နိုင်ငံရေးသမားကြီး သခင်ချန်ထွန်းက ယခု အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမား၏ မြန်မာခရီးစဉ်သည် အမေရိကန်၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် ဆွဲဆောင်ခြင်း တခု ဟု ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
“အမေရိကန်က ဒီအတိုင်း ပစ်ပယ်ထားလို့ရှိရင် ဗမာက တရုတ်နဲ့ပဲ ပိုပြီးတော့ ရင်းရင်းနှီးနှီး ဆက်ဆံသွားမှာပေါ့။ ဒီ ဟာကို မြင်တော့ကို တရုတ်ရဲ့ လူရင်း ဖြစ်မသွားအောင် ဒါ သူက ဒီလာပြီးတော့ အမေရိကန်နဲ့လည်း ဆက်ဆံရေး ကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်တာလို့ ဒီလိုပဲ မြင်ပါတယ်” ဟု သူက ဆိုသသည်။
အိုဘားမား၏ နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒအရ အာရှဒေသသည် အမေရိကန်အစိုးရအတွက် မဟာဗျူဟာအရ အရေးပါလာနေရာ ယခု ထိုင်း၊ မြန်မာ၊ ကမ္ဘောဒီးယား ခရီးစဉ်သည် ယင်းမူဝါဒ၏ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှု တစိတ်တပိုင်း ဖြစ်သည်။
သို့ရာတွင် တောင်တရုတ်ပင်လယ် တင်းမာမှုတွင် ပါဝင်နေသော ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ ဖိတ်ကြားချက်ကို ငြင်းပယ်ပြီး မြန်မာပြည်သို့ လာရန်သာ ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းသည် အန္တရာယ် ကင်း၍ဖြစ်ကြောင်း သံတမန်အသိုင်းအဝိုင်း သတင်းရပ်ကွက်များက သုံးသပ်သည်။
မြန်မာ့အရေးကျွမ်းကျင်သူ သတင်းစာဆရာ ဘာတေးလင့်တနာက အိုဘားမား၏ ခရီးစဉ်သည် အမေရိကန်အကျိုးစီးပွား ပဓာနပေါ် မူတည် စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ကြောင်း ဧရာဝတီသို့ ပြောဆိုသည်။
“ဒီပွဲက ‘တရုတ် ထိန်းချုပ်ရေး’ပါပဲ။ ဒီမိုကရေစီတို့ လူ့အခွင့်အရေးတို့အတွက် မဟုတ်ဘူး။ အဲဒါတွေ ထည့်ပြောနေတာကလည်း ရောင်းကောင်းအောင်ပါ” ဟု ဘာတေးလင့်တနာက ဆိုသည်။
အိုဘားမားသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့က အမေရိကန် သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြိုင်ဘက် ရီပတ်ဘလီကန် ကိုယ်စားလှယ် မစ်ရွမ်နီကို နောက်ထပ် သက်တမ်း ၄ နှစ် အတွက် အနိုင်ရခဲ့သည်။
တိုင်းရင်းသားအရေး ကာတာ ဖောင်ဒေးရှင်းဖွင့်မည်
မြန်မာ အစိုးရကို ဖိအားပေးရန် ဂျွန်ကယ်ရီအား HRW တိုက်တွန်း
2 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website aungkyawsan November 9, 2012 - 5:24 pm	သခင် ချန်ထွန်းခင်ဗျာ
အခု မြန်မာ ပြည် ကို ကြည့် ပါ
မြန်မာ ပြည် တည် မြဲ ဖို့ ဘာ တွေ လုပ် သင့်လဲ ၊၊၊၊၊၊။။။။။
သိပ် မကြာခင် မှာ —ဧရာ ၀တီမြစ် အရှေ့ဖက် ကမ်းက။ တရုတ်နိုင်ငံ ရဲ့( မြန်မာ ပြယ် နယ် )ဖြစ် တော့ မယ်
–ဧရာ ၀တီမြစ် အနောက် ဖက် ကမ်းက၊၊ ကုလား နိုင်ငံ ရဲ့( မြန်မာ ပြယ် နယ် )ဖြစ် တော့ မယ်
မြန်မာ ပြည် တည် မြဲ ဖို့ ဘယ် လမ်းကြောင်း နဲ့သွားရမှာ လဲ ??
မန်းတလေးမှာ က တရု တ် တွေ ။။။
ရန်ကုန်မှာ က ကုလားတွေ ပြည့် နေပြီ
Reply	U Win Maung November 12, 2012 - 7:18 pm	best seller AMERICAN ?